Ukuveliswa koLwazi: Ukufikelela kwiMillennials ngeNdlela eQokelelweyo yeDatha | Martech Zone
Ngokutsho Uphando lwakutsha nje olwenziwe nguZillow, iimillennials zichitha ixesha elininzi ziphanda, zithenga ngeyona ndlela ifanelekileyo kunye nokuthelekisa amaxabiso ngaphambi kokuthenga. Kwaye ngeli xesha litsha lomthengi onolwazi olunzulu limele utshintsho olukhulu lweemveliso kunye neenkampani, ikwabonelela ngegolide. Ngelixa abathengisi abaninzi bewutshintshile umxube wabo wentengiso ukuze bagxile kwimisebenzi yedijithali, kubalulekile ngokulinganayo ukuba basebenzise ubuncwane bolwazi obufanayo obusetyenziswa zizigidi zeminyaka yanamhlanje.
Ukusetyenziswa kwenkqubela phambili yakutshanje kuphando kunye netekhnoloji yedatha akufuneki ukuba ibekelwe umda kwicala labathengi. Iinkampani zinokulwa idatha ngedatha ukuze ziqonde ngcono abaphulaphuli ekujoliswe kubo. Ngokwazi ukuba iimillennials zihamba njani kwinkqubo yophando, kwaye zeziphi iintlobo zolwazi abalusebenzisayo, abathengisi banokuziqhelanisa ngokufanelekileyo ukuze babhenele kule ndawo ibalulekileyo.
Banike Into Bayifunayo
Cinga ngento eyenza indawo enje ngeAmazon inyanzelise - iya kumazi umthengi kwaye inokwenza iingcebiso zokuthenga ezilungiselelwe loo msebenzisi. Kwaye akukho sizathu sokuba ishishini lakho lingenako ukungena kolu hlobo lwedatha kubahlalutyi, Nokuba uqhuba umsebenzi wezitena nodaka.
Umzekelo, siphuhlise ialgorithm kunye ne-1,000 eziguquguqukayo ezinceda abathengisi beemoto ukuba baqonde iintlobo zezithuthi abathengi babo abanokuthi bazithenge. Oku kuthathela ingqalelo izinto ezinje ngokuziphatha kokuthenga kwangaphambili, iimveliso ezaziwa kakhulu kurhwebo lwendawo, uhlalutyo lokhuphiswano nokunye okuninzi. Ngale ndlela, emva kophando lwemileniyali uhlobo lweemoto alufunayo, siyaqinisekisa ukuba esi sithuthi sikumthengisi ukuze bakulungele ukuthengisa xa iwaka leminyaka libonakala.
I-Millennials ayindwendweli amaqashiso emoto ukungakhangeli ngokungakhathali; benza loo nxalenye kwi-intanethi. Bachitha iiyure 17 ukuthenga kwi-intanethi ngesithuthi ngaphambi kokuthenga. Kule minyaka yanamhlanje, ngumsebenzi womthengisi ukuqinisekisa ukuba iqashiso lilungiselelwe ukuthanda izinto zeminyaka eliwaka. Millennials axhobe data; Kuya kufuneka uxhobile ngedatha eninzi (ukuba ayikho ngaphezulu!) ukuze ubalungele. Enye indlela elula yokwenza oku kukujonga idatha yokuthengisa eyimbali, kwaye ngubani othengisa kuye. Ngaba uguqula abathengi beminyaka eliwaka? Ukuba kunjalo, zeziphi iimveliso okanye iinkonzo abazinikelayo? Ngokusebenzisa olu lwazi, unokuyila uluhlu lwakho olululo kwaye wandise ukuthengisa okuzayo.
Ipesenti ye-81 ye-18-34 yabantwana abafuna izimvo kwabanye ngaphambi kokuthenga, ngokwe uphando oluvela eMintel. Kwaye ngelixa umnini-shishini esenokukrokrela ukucinga ngezimvo ezijolise eluntwini, uphononongo lwe-Intanethi lubonelela ngethuba lokufumana ingxelo engacocwanga, ethembekileyo malunga nokuba abathengi bakho bacinga ntoni ngamava abo. Okwam uphononongo kwiziza ezinje ngeYelp, iEdmunds, iTransAdvisor, iCars.com, uluhlu lukaAngie (nokuba yeyiphi na evakalayo kumzi mveliso wakho) kwaye usebenze neqela lakho ukusombulula naziphi na iindawo ezixhalabisayo.
Kodwa sukugxila kuphela kuvavanyo olubi. Ukuphononongwa okuhle kunokuba nakho ukufundisa ngakumbi, kuba bachaza umbono wegama lakho kunye nodumo. Ngaba waziwa ngenkonzo ebalaseleyo yabathengi? Ngezaphulelo ezinkulu? Kukhetho olubanzi? Xa sisebenza nabathengisi beemoto, sichonga amandla abo, kwaye sisebenza nabo ukuyila urhwebo lwabo kunye namashishini ngokufanelekileyo. Umzekelo, ukuba abathengi bayawathanda amaxabiso abo, basenokungafuni ukubhengeza le ritzy BMW.
Vavanya amava aSelfowuni
Ukufumana nje iwaka leminyaka kwivenkile yakho akwanelanga, kuba amava eselfowuni ngoku adlala indima ekuziphatheni kwivenkile yokuthenga. Iipesenti ezingama-57 zewaka leminyaka Sebenzisa iifowuni ukuthelekisa amaxabiso ngelixa usesitolo. Ukuba unento ethile etsala iliso lakhe, kwaye umthengisi oluncedo ophendula imibuzo yabo, usengaphulukana nentengiso ukuba umthengi uGoogles okhuphisana naye ezantsi kwesitrato aze afumane ixabiso eliphantsi. Bafunda ulwazi olusemgangathweni- umzekelo, ukuba umthengisi weemoto uqhubeka njalo malunga nokuthembeka kwesithuthi, kodwa emva koko umthengi ufunda zonke ezi zinto ziphononongiweyo malunga nokuphuka kwemoto, baya kuba nemibuzo.
Iindaba ezimnandi apha kukuba amava eselfowuni anokusebenza njengedatha yeqela lakho. Yenza amava okuthenga okuhlekisayo kwaye ucinge ngezinto umntu anokujonga kwifowuni yakhe. Izinto ezithile kwivenkile yakho, okhuphisana nabo bendawo, uphononongo, njl. Unokufunda ukuba umntu okhuphisana naye ubonisa iintengiso zezaphulelo ngalo lonke ixesha umntu ekhangela imveliso eyaziwayo. Okanye mhlawumbi iwebhusayithi yakho ayibonisi xa umntu ekhangela loo mveliso, ebonisa ukuba unokuba nomsebenzi othile we-SEO.
Kodwa ayisiwo nje umdlalo wokuzikhusela- unokuveza namathuba. Umzekelo, sincede amaqabane ethu abathengisayo ukuba achonge iimeko apho abo bakhuphisana nabo bengenzanga umsebenzi omkhulu wentengiso yokwenza okanye imodeli ethile. Oku kukhuthaza abathengisi bethu kwisitokhwe semodeli, mhlawumbi ngexabiso elingcono okanye kumgangatho, kunye nokwenza ingeniso engaphezulu.
Uhlaziyo lwedijithali alukho malunga nokuqala kwiphepha le-Facebook okanye ukuqhuba ezinye iintengiso. Le mizekelo ingentla imele nje iindlela ezimbalwa onokuthi ucofe ngazo kulwazi olukwi-Intanethi, kunye namava omsebenzisi, ukuze uqonde ngcono umthengi wakho. Ngokujonga kwiWebhu ngamehlo abathengi bakho, uya kufumana umbono wayo yonke into abayibonayo ngexesha lokuthenga, ukuvumela ukuba uhlengahlengise ngokufanelekileyo ukuze uphumelele ishishini labo.
tags: amaqashiso eemotoiimotoeqhutywe kwedathaukuguqulwa kwedijithalii-goldman sachsmillennialmillennialsmintelamava eselfowuniuphononongo olubiindlela yokuziphatha yokuthengaReviewszillow
UJohn Manganaro yi-VP yeMveliso kunye noVavanyo lwe UKUQHUBA, apho anoxanduva lokuyila imveliso kunye nohlalutyo lwedatha, egxile ekuncedeni abathengisi ukuba baphathe iimpahla zabo ezisetyenzisiweyo ngokufanelekileyo. Ngaphambili, uManganaro wayengumcebisi kuLawulo lwePwC kunye nomnini wemveliso kwimibutho yezobuchwephesha, kubandakanya neCars.com.
Ngaphandle kweNtengiso yeNtengiso, ukuThengisa nguMsebenzi onzima